WAAYIHII WARSAME Q36AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q36AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q36AAD
Warsame markii qolkii cariishka ahaa laga saaray dhawr habeenna uu dariiqyada Dhoobley seexday ayuu maalintii dambe wacay Faaiso oo la socotay wixii dhacay waxa uu na u sheegay xaalka uu ku sugayn yahay. Warsame noloshiisi qof shilin ma uusan waydiisan in uu Faaiso waco oo nolosha uu ku nool yahay la wadaago aad ayuu u dhibsanayay waxa uu se xaqiiqsaday in aysan jirin meel kale oo u ciirsado.
Faaiso lacag shan boqol oo doolar ah inta ay u soo dirtay ayay ku tiri Nairobi ku soo noqo.
Warsame ma uusan qaadan taladii Faaiso ee ahayd in uu Nairobi ku noqdo ee waxa uu go’aansaday in uu Hargaysa aado. Waxa uu goostay in uu Soomaaliya iyo Afrika oo dhan ka dalaabo. Halkii uu u tahriibi lahaa ayuu ka fakaray, markii uu talo rogrogayna waxaa diiraddu u qabatay in uu Australia u tahriibo. Si uu Australia u gaaro marka hore waa in uu Indonesia tago kadib na dooni ka raaco. Si uu Indonesia u tagana waxa uu u baahan yahay Baasboor Soomaali ah. Muqdisho haddii uu aadi lahaa waxa uu ka cabsaday saaxiibbadiis hore, Shabaab. Sidaas darteed halka uu baasboor ka heli karo waa Hargaysa.
Warsame diyaarad ayuu Dhoobley ka raacay, saacado uu Muqdisho taraansit ku sii noqday kadib waxaa uu ka degay Hargaysa.
Markii uu Hargaysa tegay ayuu Faaiso la hadlay u na sheegay qorshihiisa uu Australia ugu tahriibayo. Faaiso waxa ay Warsame u ballanqaadday in ay dhabarka u ridanayso kharashka ilaa uu Australia ka tagayo.
Kadib asbuucyo uu Warsame Hargaysa joogay waxa uu gacanta ku dhigay baasboorka Soomaaliga kadib na waxa uu xaraystay fiiso caafimaad oo ku tagayo isbitaal ku yaalla caasimadda Indonesia ee Jakarta. Maalmo kadib na fiisadii waa u timid.
Markii Warsame fiisadii gacanta ku dhigay waxa uu wacay soddohdiis Caasho oo ay ismaqalkooda isugu dambaysay kadib geeridii Idil oo uu tacsiyeey markaas oo maamo Caasho, Warsame caro iyo haraan kala duldhacday geerida gabdheedi Idil na ay asaga dusha u saartay. Maalintaas maamo Caasho waxa ay Warsame ku tiri “ma doonayo muuqaaga iyo maqalkaaga ee dib dambe ha ii soo wicin haddii laguu soomay oo laguu salaaday.”
Warsame waxa uu maamo Caasho waydiiyay xaaladda wiilkiisi Guuleed balse ayada oo aan wax jawaab ah siin ayay taleefanka ku jartay.
Subaxnimo ay goorsheegtadu tahay kow iyo tobankii subaxnimo ayuu Warsame Jubba Airways ka raacay Cigaal International Airport waxa uu na kaga degay garoonka diyaaradaha ee Dubai halkaas oo uu ka sii raacay diyaaradda Garuda ee laga leeyahay Indonesia toban saac kadib na waxa ay cagodhigtay Jakarta.
Warsame waxa garoonka Jakarta ka qaaday Dhicisow oo Faaiso ku xirtay. Dhicisow waa arday wax ka bartay Jaamacad Jakarta ku taal. Dhicisow waxa uu Warsame geeyay gurigiisa halkaas ayaana Warsame degganaa ilaa uu Australia doon u raaco.
Habeen saqdhexe ayuu Warsame dooni ka raacay xeebaha Indonesia. Doonida waxaa saaran siddeetameeyo qofood oo kula dhashay Afghanistan iyo Sirilanka, Warsame iyo wiil iyo gabar soomaali ah. Wax ay doonidii biyaha badwaynta Hindiya dhexjibaaxdaba galabtii dambe casirkii ayay soo gaartay xeebaha waqooyi ee Australia waxaana isla markiiba gacanta ku dhigay ciidamada badda Australia oo dadkii doonidii saarnaa u daadgureeyay xero qaxooti oo ku taal waqooyiga Australia.
Warsame xeradii qaxootiga waxa uu ku jiray muddo lix bilood ah.
Lix bilood kadib Warsame waxa la siiyay sharciga degganaanshaha Australia waxaana la geeyay magaalada Brisbane. Subax barqadii ayaa Warsame diyaarad laga saaray xeradii qaxootiga saacado kadib na waxaa laga dajiyay garoonka diyaaradaha ee Brisbane halkaas oo ay ay ka qaadday maamo caddaan ah oo lagu magacaabo Angela u na shaqaysa waaxda guryaynta ee dawladda Australia waxa ayna geysay guri ay u dhammaystiran yihiin dhammaan agabkii guryaha iyo cunto maalmo uu ku moodo. Waa guri ka kooban hal qol, fadhi, jiko iyo musqul. Angela waxa ay Warsame bartay sida kurshiinka gaaska ah cuntada loogu karsado waxa ayna u sheegtay in berri foog u imaanayso si ay u la soo dhammayso hawlaha kale ee laga ma maarmaarka ah.
Foogtii dambe ayay Angela Warsame u timid waxa ay na ku soo wareejisay magaalada Brisbane, waxa ay u soo samaysay kaarka caafimaadka, kan bangiga iyo kan canshuurta. Warsame waa uu la yaabay markii Angela gaysay xafiiska cashuuraha Australia si ay kaarka canshuurbixiya ugu samayso waxa uu iswaydiiyay ma ba shaqayne maxay tahay canshuurtaan baas oo sanka la iska galinayo?
Waxa kale oo Angela Warsame ka soo qortay iskoolka Afka Ingiriisiga iyo dhaqanka Australia lagu barto. Waxa kale oo ay gaysay suuq guriga uu degay u dhow waxa ayna tusisay halka baska iyo tareenka laga raaco looga na dego. Sidoo kale waxa ay ka soo diwaangalisay xafiiska lacagaha cayrta ah laga qaato.
Warsame waa uu la qabsaday Australia iskoolkii lixda bilood ahaa ee afka iyo dhaqanka Australia lagu baranayay waa uu dhammeeyay waxa uu na dhaqo ka helay warshad biraha samaysay. Subixii lixda aroornimo ayuu shaqada galaa waxa uu na ka soo baxaa saddexda galabnimo. Waxa uu helaa dhaqaale ku filan uu ka biilo walaalihiis Soomaaliya jooga waxa uu meel ka dhigto. Balse Warsame inkasta oo uu ka baxay maalmihii rafaadka, tahriibka iyo busaaradda haddana Warsame ma deggana niyaddiisuna ka fadhido. Waxa uu daris la yahay welwel iyo walbahaar. Waxa u ka welwelsan yahay wiilkiisi Guuleed ee rajayga ahaa. In badan oo Warsame isku dayay in uu la hadlo maamo Caasho, Guuleed ayeydiis ku ma uusan guulaysan oo maamo Caasho ma doonayso in codka Warsame maqasho. Dhawr goor oo uu ergo u diray na guul ka ma uusan gaarin. Warsame waa uu ogyahay in Guuleed caafimaad qabo guriga ayeydiisna joogo Gaduudow oo Nairobi jooga ayaa uga soo warramay balse Warsame waxa uu rabaa in uu mar un maqlo codka wiilkiisi Guuleed si Guuleed u ogaado in uu aabbe leeyahay. Warsame waxa uu mar walba xasuustaa erayada ugu dambeeyay ee uu Idil ka maqlo, “Warsame ogow in aad Guuleed hooyo iyo aabbe u tahay”. Ma uu aadi karo Nairobi oo sharci uu ku baxo ma haysto, waa in uu afar sannadood sugo ilaa uu dhalashada Australia ka qaadanayo.
Galab walba marka uu Warsame shaqada ka soo baxo waxa uu fariistaa kursi yaal beer caagaran oo ku taal dusha sare ee qarka ku foorara xeebta Brisbane ee badwaynta Baasifigga. Mar walba oo uu fiiriyo biyaha badda ee hortiisa waxa uu muuqata gacalisadiisi Idil ee biyaha ku hafaynaysay gacabta wirfinaysa si mid badbaadiyaa ugu soo gurmado. Waxaa uu dareemaa ciil iyo qoomamo, waxaa uu dareemaa in uu dambi ka galay Idil, oo waxa uu naftiisa ku canaantaa maxay Idil u baratay. Indhihiisa ayuu hiifaa, waayo haddii aysan ayagu arkin Idil maanta adduunka ayau joogi lahayd.
Waxaa uu dib u ogocdaa waayihii uu soo maray asaga oo ka qoomamaynaya wixii uu falay waayihii Muqdisho iyo Jubbooyinka.